प्रिमियर इन्स्योरेन्सको नाफासँगै अघिकांश सूचकमा चमक, ईपीएस पनि बढ्यो - Arthasansar
प्रिमियर इन्स्योरेन्सको नाफासँगै अघिकांश सूचकमा चमक, ईपीएस पनि बढ्यो
सोमबार, २० बैशाख २०७८, १२ : ०५ मा प्रकाशित
प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेको छ । उक्त विवरण अनुसार कम्पनीले आकर्षण प्रगति गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा कम्पनीको खुद नाफा ५२.०६ प्रतिशतले बढेर २८ करोड ९६ लाख २० हजार रुपैयाँ पुगेको छ छ । गत वर्षको यसैअवधिमा कम्पनीको यस्तो नाफा १९ करोड ४ लाख ५४ हजार रुपैयाँमा सीमित थियो ।
चैत मसान्तसम्म कम्पनीले ५९ करोड ८२ हजार रुपैयाँ खुद बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । गत वर्षको तुलनाम यो आम्दानी ११.४१ प्रतिशतले धेरै हो ।अघिल्लो वर्ष यसले ५२ करोड ९६ लाख ४५ हजार रुपैयाँ खुद बिमा शुल्क आर्जन गरेको थियो ।
हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी एक अर्ब ७ करोड ४५ लाख र जगेडा कोषमा ३३ करोड ३९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै, कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी १२ रुपैयाँ ३१ पैसाले बढेर वार्षिक ३५ रुपैयाँ ९४ पैसा पुगेको छ । प्रतिसेयर नेटवर्थ २१० रुपैयाँ २२ पैसा छ ।
संचालक निर्वाचनमा मतदानको अवस्थापछि जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको साधारणसभा स्थगित
संचालक निर्वाचनमा मत खसाल्ने अवस्था आएपछि जनरल इन्स्योरेन्सको साधारण सभा अन्योलमा
यूनाइटेड इन्स्योरेन्सको नाफामा उल्लेख्य वृद्धि, बीमा शुल्क आम्दानी पनि बढ्यो
प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको नाफासँगै अधिकांश सूचकमा चमक, प्रतिसेयर आम्दानी कति ?
भर्खरै आईपीओ ल्याएको प्रभु लाइफको नाफा १४८.३३ प्रतिशतले बढ्यो, ईपिएस कति ?
युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सको नाफामा गिरावट